Mai Chibwe VekwaZimuto: Munhukadzi Kuzvidzidzisa Kutunda Pakurhojewa
Nhai Mai Chibwe, ndine dambudziko rokuti handina kumbotundawo pakuvata nomurume. Ndinohwa vamwe vachiti vanotunda asi ini handizivi kuti zvinoitika sei uye kuti ndingazviitawo sei. Ndinoda chose kuvata nomurume wangu uye ndinonakirwa nazvo asi handina kumbotunda pazviri.
Kunakigwa nokuiswa kuri mufungwa yomukadzi, kwete pazviito zvomurume
Kune vamwe vakadzi vanoti kana akaona kuti murume ari kukoira zvinobhowa, Sokuti murume anongoita zvimwezvo zuva nezuva, mukadzi anongopedzisira ongonyebera kuti anakigwa akatunda kuti murume akasire kupedza zvokubhowekkana zvipere. Zvinohi mahure emari uye aya anohi maSMALL HOUSE inyanzvi pakunyebera kutundiswa nomurume, zvinova zvinopa murume manyawi kufunga kuti anogona kurhoja asi iye asingagoni.
Asi hwisisa kuti varume vakawanda vechiZImba vanotya bhinzi. Vanofunga kuti ine zvainazvo zvinokuvadza murume. Zvokuti kana yako iri hombe, murume wako anokwanisa kutyiswa nayo. Kana uchida kuvhundusa murume wako iti paya mapedza kuisana wotora UNDERWEAR yake wozvipukuta nayo. Kana murume wako akakurira mumhuri yaiita zvemishonga anokasira kukufungira uroyi, izvo iwe wanga wangokangamwa kugadzirira tawero.
Posted by Mai E Chibwe at 13:30
Thank you very much for the very enlightening advice.
Mai chibwe 2 minutes murume atodiridzira kare ndodii kuti anonoke kudiridzira nekuti ndinenge ndisati ndatundawo
Verenga pakahi kononoka kudiridzira mukadzi. Ugobatsira murume wako kudzidzira kuzviita. Dzidza kujairisa murume kuti mukapindana momosakoirana kwenguva refu muchimboita nyaya muchipota uchikisana, mombopatsana monomwa DRINK, modzoka mopindana futi muchiita maJOKES pazviri. Chinoita murume akasire kutunda inyaya yokuti hamuisani kakawana pavhiki uye chombo chake hachina kujaira kudziya kwemuviri wako. Jaira kutambisa chombo nemaoko uchipota uchichiisa pakati pako nomurume makatsimirirana icho chimire chiri pakati padumbu pako.